AbakwaGupta sebedayise isiteshi i-ANN7 kanye nephephandaba i-The New Age | News24
Cape Town – Inkampani kaMzwanele Manyi isithenge izinkampani zezindaba zomndeni wakwaGupta, i- ANN7 (isiteshi sezindaba sikamabonakude) kanye ne-The New Age (iphephandaba), lokhu kumenyezelwe ngoMsombuluko.
Enkampani yabakwaGupta, i-Oakbay Investments, esitatimendeni ithe inkampani kaManyi, iLodidox, ithenge i-ANN7 (Infinity Media) ngo-R300m kanye ne-The New Age (TNA Media) ngo-R150m.
Lesi sivumelwano kulindeleke ukuba siphothulwe emasontweni ambalwa ezayo, ngokusho kwe-Oakbay.
Lokhu kudayisa kwenzeka njengoba ibhange, iBank of Baroda, seliyeka ukusebenzisana nezinkampani zomndeni wakwaGupta, kanye nangemuva kokuthi amabhange amane aseNingizimu Afrika athatha isinqumo sokuthi angabe esasebenzisana namabhizinisi alo mndeni ngonyaka ka-2016.
UManyi uthe: “Ngijabule ngokufinyelela esivumelwaneni ne-Oakbay futhi ngibheke phambili ekuphothuleni isivumelwano ngempemelelo.”